Kunyange vashandisi vane ruzivo vanogona kuzviwana zvakaoma kuudza mamwe maPhones akapatsanuka. Apple inogadziridza iyo iPhone gore rega, asi hazviwanzo chinja dhizaini - dzimwe nguva shanduko dzakakosha dziri mukati, senge zvinokurumidza zvinhu zvitsva - izvo zvinogona kuita kuti zvive zvakaoma kwazvo kuziva kuti ndeipi modhi yauinayo.
Iwe unogona kunge uchinetseka kuti ndeipi iPhone yauinayo nekuti chete mamwe mamodheru anogona kumhanya yazvino vhezheni yeIOS. Kana iwe ungangoda kuziva nekuti uri kuronga kutengesa. Iwe unogona kutove nenyaya newe iPhone uye unoda kuziva kuti ndeipi modhi yacho kuti Apple kana wechitatu-bato gadziriso anogona kupa gadziriso.
Pane zvikonzero zvakawanda nei ungangoda kutaurira mutsauko pakati pePhones dzakasiyana. Tauya kuzobatsira.
Maitiro ekuudza iyo iPhone yauinayo
Nzira iri nyore yekuziva iyo iPhone yaimbove yekutarisa 'A' modhi nhamba kumashure, uye muchinyorwa chino tinonyora nhamba dzeA pane yega yega iPhone. Asi Apple haichadhindiri manhamba zvakare, saka kune avo vane mamodheru achangoburwa, kana avo vanoona nhamba yacho iri diki zvekutadza kuverenga, pane dzimwe nzira: unogona kutarisa mumaSystem, kana kutarisa chimiro chefoni uye zvekunze maficha uye kugadzira chitupa uchishandisa rondedzero nemifananidzo pazasi.
Kana iwe uchinetseka kuziva imwe yemamwe ako Apple zvishandiso, isu zvakare tine magwara ekutsvaga iyo iPad yauinayo uye iyo Mac yauinayo.
Tarisa muZvirongwa zveiyo modhi zita uye nhamba
Nzira yakapusa mazuva ano ndeyekutarisa muZvirongwa.
Vhura iyo Zvirongwa app, uye enda kuGeneral> About.
Mubhanga repamusoro rezvinyorwa iwe uchaona Model zita, ine iPhone 12 Pro kana chero iri pedyo nayo.
Iri peji rinokuudzawo kugona kwechigadzirwa, icho chakanyorwa zvishoma zvishoma pasi.
Mamwe maPhones ekare haazoratidze zita reiyo iPhone pano. Semuenzaniso, iyi iPhone 6s inoratidza musanganiswa wetsamba uye nhamba panzvimbo; ndiyo nhamba yemhando uye unogona kushandisa izvi kuziva iyo iPhone.
Iwe zvakare uchaona iyo Model Model pazasi Model zita pane nyowani iPhones. Nekushomeka Zvirongwa zvinoratidza iyo M nhamba (inozivikanwawo seSKU - uye kana iwe uine imwe yekutsiva modhi ingangotanga neN), asi unogona kuibata kuti uratidze iyo A nhamba panzvimbo, iyo inogona kushandiswa kuziva iyo iPhone modhi yaunayo.
Iyo SKU / M nhamba / N nhamba iri nyore, zvisinei, nekuti inopa chitupa chakanyatsojeka kupfuura iyo A nhamba kana kunyangwe iyo Model zita (iyo inotsanangudza kugona kwekuchengetedza uye kunyange ruvara). Pane nhamba hombe yezvinokwanisika M nhamba - zvakanyanya kupfuura zvatinganyora pano. Tarisa iyo iPhone Wiki kune runyorwa ruzere.
Zvirongwa, sezvatinoona, zvinonyanya kubatsira kana zvasvika pakuziva iyo iPhone. Asi ine zvishoma pasi divi rekuda kuti chako chishande chinoshanda uye chinowanikwa kwauri; kana iwe uri kuyedza kuziva iyo zvidhina mudziyo kana imwe yausingakwanise kuvhura, izvi hazvizoshandise zvakanyanya uye zvirinani kuti uenderere mberi kune inoonekwa chitupa chati mune inotevera chikamu
Tarisa kumashure kweA nhamba
IPhone dzekare dzinenge dziine nhamba yekuzivisa yakadhindwa kuseri. Iyi inhamba diki inotanga nemavara A, uye yakanyorwa kuti 'Model'. Chichava chimwe chinhu chakadai se "A1203" kana "A1634".
Kana tichiti "nhamba diki" tinoreva zvishoma, uye unogona kuzviwana zvakaoma kuverenga iyo nhamba neziso rakashama. Girazi rinokudza rinobatsira kana iwe uine rimwe!
Nekudaro, iyo iPhone 8 uye gare gare haina iyi nhamba yakadhindwa kumashure. Kana iwe usingawani chero chinhu pano iwe unenge uchiziva kuti yako iPhone iri iPhone 8 kana gare gare.
Nekuda kwekuita zviri nyore isu tichaidaidza iyi kuti iyo nhamba, zvinopesana nenhamba yeM inowanikwa mune Zvirongwa zvinokurukurwa pamusoro, uye yakareba IMEI nhamba yekuzivisa, iyo yakasarudzika kune yako yega ruoko.
Paunenge uchinge wawana iyo nhamba yeA, tarisa ichitarisana nerunyorwa urwu kuti uone kuti ndewe modhi yaunayo. (Cherekedza kuti kune akawanda maA nhamba kune mamwe maPhones. Aya anoreva mavhezheni enzvimbo dzakasiyana, netiweki netiweki uye zvichingodaro. Uye kunyangwe maPhones achangoburwa ane nhamba dzeA - hazvisi nyore kuwana.)
A1203: Yekutanga iPhone
A1456, A1507, A1526, A1529 kana A1532: iPhone 5c
A1453, A1457, A1528, A1530 kana A1533: iPhone 5s
A1549, A1586 kana A1589: iPhone 6
A1522, A1524 kana A1593: iPhone 6 Uyezve
A1633 kana A1688: iPhone 6s
A1634 kana A1687: iPhone 6s Plus
A1723, A1662 kana A1724: iPhone SE (2016)
A1660, A1778 kana A1779: iPhone 7
A1661, A1784 kana A1785: iPhone 7 Uyezve
A1863, A1905 kana A1906: iPhone 8
A1864, A1897 kana A1898: iPhone 8 Uyezve
A1865, A1901 kana A1902: iPhone X
A1984, A2105, A2106 kana A2108: iPhone XR
A1920, A2097, A2098 kana A2100: iPhone XS
A1921, A2101, A2102 kana A2104: iPhone XS Max
A2111, A2223 kana A2221: iPhone 11
A2160, A2217 kana A2215: iPhone 11 Pro
A2161, A2220 kana A2218: iPhone 11 Pro Max
A2275, A2298 kana A2296: iPhone SE (2020)
A2176, A2398, A2400 kana A2399: iPhone 12 mini
A2172, A2402, A2404 kana A2403: iPhone 12
A2341, A2406, A2408 kana A2407: iPhone 12 Pro
A2342, A2410, A2412 kana A2411: iPhone 12 Pro Max
Maitiro ekuudza maPhones akaparadzaniswa nekuona
Kana chero chikonzero chiri pamusoro nzira chisingashande, usazvidya moyo. Iwe uchiri kugona kutaura kuti ndeupi rudzi rwe iPhone iwe yauinayo nekutarisa ayo kuvaka, ekunze maficha uye zvichingodaro. Ingo zvienzanisa neichi chinongedzo, icho chinosanganisira ese mamodheru e iPhone.
The yekutanga iPhone kubva 2007 zviri nyore kuziva. Iyo ine grey / sirivheri kumashure ine hombe nhema bhendi kuyambuka pasi. Zvinotaridzika seizvi:
iPhone 3G uye iPhone 3GS
Kana yako iPhone iine yakakomberedzwa yepurasitiki kumashure asi isina dema bhendi kubva kune yekutanga iPhone, iwe une iPhone 3G or 3GS. Izvi ndizvo zvavanoratidzika.
Imwe nzira yekuudza maviri aya akaparadzaniswa ruvara - kana iri chena, une 3GS.
Ose maviri mamodheru akatengeswa mune nhema dema, zvisinei, saka kana iwe uine imwe yeaya, tarisa kupenya kwekutsanangurwa kumashure. Pa 3GS, Apple logo uye chinyorwa pazasi zvakafanana sirivheri inopenya; pane iyo 3G, chinyorwa hachina kupenya kupfuura logo.
Ive nekuchengera kuti usakanganise aya maviri mamodheru neiyo nyowani iPhone 5c (iyo inotaridzika yakati fananei - ona pazasi kuenzanisa).
iPhone 4 uye iPhone 4s
The iPhone 4 uye iPhone 4s vese vane girazi kumberi uye girazi kumashure uye vanouya vatema kana vachena. Hezvino izvo zvavanoratidzika
Zvakaoma kutaurira iyo iPhone 4 uye iPhone 4s zvakaparadzana, zvinosuwisa. Imwe nzira ndeyekutarisa SIM tireyi kurudyi - kana ukasakwanisa kuwana kuvhura wobva watarisa (iyo CDMA vhezheni ye) iyo iPhone 4, iyo yaiwanikwa zvese pamwe uye isina SIM tireyi. Iyo iPhone 4s inogara iine SIM tireyi.
Iwe unogona zvakare kutarisa iyo yekuchengetera kugona, iyo inogona kupa chiratidzo. Iyo 4 yakatengeswa mu8, 16 uye 32GB masimba; iyo 4s yaiwanikwa mune zvese izvi asi zvakare yakawedzera 64GB modhi. Tarisa Zvirongwa> Zvimwe> Nezve, uye kana Kugona kuri chero kwakakwirira kupfuura 32GB saka une iPhone 4s. (Izvo haizove yakazara 64GB, hongu, nekuti imwe yekushambadzira kugona inotorwa ne firmware nezvimwe zvakadaro.)
The iPhone 5 inotaridzika yakafanana neiyo iPhone 4 ne4s asi inouya nehurefu 4in kuratidza (kuyerwa diagonally, kona kusvika kukona). Izvi zvinoreva kuti inogona kukwana mitsara mishanu yemapikicha eapp (kuwedzera chechitanhatu, mutsara wedoko, pazasi), nepo iyo iPhone 4s uye yapfuura yaigona kukwana mitsara mina (pamwe nechiteshi). Hezvino zvazvinoita:
The iPhone 5s inotaridzika zvakanyanya kufanana neiyo iPhone 5, asi iyo yekupa ndiyo iyo yeTouch ID zvigunwe zvigunwe.
Ukatarisa pabhatani reKumba, uchaona kuti harisisina chikwere pairi - ingori denderedzwa rakajeka. Pane machena-kumberi mamodheru iwe unogona kuona inopenya simbi mhete yakatenderedza kumucheto; iro dema rakasviba chose.
Zvirongwa zvemavara zvakasiyana zvakare, neGoridhe, Sirivheri uye Space Grey kutsiva Dema nechena.
Izvi zviri nyore kuona. Iyo iPhone 5c inouya yakatarwa yakajeka mavara epurasitiki uye ine yakakomberedzwa epurasitiki kumashure.
Iyo zvakare kureba uye mraba kupfuura mamwe epurasitiki mamodheru (senge iyo iPhone 3G uye 3GS), saka zviri nyore kuziva.
iPhone 6 uye iPhone 6s
Iwo matanhatu-akateedzana nharembozha akaona kugadziriswazve kuzere, iine mativi akakomberedzwa anotsiva iyo squarer kutaridzika kwemafoni apfuura. Iwo masikirini akakura kupfuura ekare mamodheru, zvakare: vanoyera 6in diagonally. Iwo maModel modhi achine makuru makuru skrini, ehe saizvozvo.
Hezvino izvo iPhone 6 uye iPhone 6s fanana. Iyi ndiyo iPhone 6s - iwe unogona kutaura nekuti yakauya nepingi pamwe nesirivheri, goridhe uye Space Grey inopihwa neiyo iPhone 6.
Kufunga kuti hauna rombo rakaringana rekutarisa pingi (nehunyanzvi Rose Goridhe) modhi, inova yekufa yakapihwa, tsvaga tsamba S kumashure, pazasi pezwi rekuti iPhone. (Inoonekwa mumufananidzo uri pamusoro.) Izvi zvinoratidza kuti iri iPhone 6s, zviri pachena pachena.
iPhone 6 Plus uye iPhone 6s Plus
The iPhone 6 Plus uye IPhone 6s Plus zvinoita kunge iyo iPhone 6 asi yakakura kwazvo, iine 5.5in ekuratidzira (kuyerwa diagonally). Vane nzvimbo yemitsara mitanhatu yemifananidzo paImba chidzitiro, pamwe nechiteshi chengarava.
Zvekare, chete iyo 6s Plus inouya muRose Goridhe, uye iyo S modhi inosarudzwa ne tsamba S kumashure, pazasi peizwi iPhone.
The chepakutanga iPhone SE inoshandisa iyo yakafanana scheme senge iyo iPhone 6 chigadzirwa mutsara, asi iine zvakafanana dhizaini yezvinhu zveiyo iPhone 5s. Bheji rako rakanakisa kuziva pakati pe5s uye SE ndeyekushandura iyo iPhone kana kutsvaga iyo SE sitampu kumashure.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti iyo SE inouya muRose Goridhe, nepo iwo mashanu aingouya muSirivheri, Space Grey uye Goridhe.
The iPhone 7 Inozvirumbidza 4.7in skrini, ine girazi kumberi uye aluminium kumashure. Izvo zvakafanana ne6 ne6, asi yakatetepa, uye kumashure kwemuviri warasa mitsara yakatwasuka kumusoro nekuzasi. Iyo haina headphone jack pazasi: pane ingori imwechete Mheni chiteshi pakati penzvimbo yepazasi, ine mutauri grilles chero mativi.
Ndizvo inowanikwa mumavara matanhatu, uye yaive kutanga iPhone kuti iuye yakatsvuka.
Tarisa iko kupinda kweiyo iPhone 8 pazasi, nekuti izvo zvakafanana; mutsauko mukuru ndewekuti iwo manomwe ane aruminiyamu kumashure, nepo iwo masere aine girazi kumashure.
The iPhone 7 Plus haina kushamisika yakafanana neiyo iPhone 7 - mutsauko mukuru iwo mukuru 5.5in kuratidza. Sezvo neiyo 7, inozvirumbidza pamberi pegirazi nesimbi kumashure, iyo kamera inobudikira kubva zvishoma. Inowanikwawo mu mavara matanhatu akasiyana, kusanganisira tsvuku (haina kuratidzwa pazasi). Uye hapana chiteshi chefoni.
Muchokwadi, iyo chaiyo yekupa ndiyo yakatwasuka twin-lens kumashure-yakatarisana kamera: hezvino izvo zvinoita senge:
Zvekare, tarisa iko kupinda kune yakafanana chaizvo iyo iPhone 8 Plus pazasi. Iyo 7 Plus ine aluminium kumashure, nepo iyo 8 Plus ine girazi.
The iPhone 8 yakafanana neiyo iPhone 7: naiyo ine 4.7in skrini uye isina headphone jack. Musiyano mukuru kubva pa7 ndeyekuti uyu modhi une girazi kumashure pane aruminiyamu; kana pasina nhamba yakanyorwa kumashure iyo zvakare inogona kunge iri yekupa, nekuti panguva iyi ndipo pakaburitswa Apple ipapo.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi? Iyo 8 inouya mune 64GB kana 256GB sarudzo dzekuchengetedza, nepo iyo 7 ichiuya muna 32GB, 128GB kana 256 GB; tarisa Zvirongwa> Zvakajairika> Kuchengetwa kwe iPhone uye ona kana uchigona kubvisa imwe yesarudzo nenzira iyoyo. Uye pakupedzisira, nepo ivo vanomwe vakauya vatema, goridhe, Rose Goridhe, sirivheri, tsvuku uye inosekesa inopenya Jet Nhema, iwo masere anongouya nesirivheri, Space Grey, goridhe idzva repinki (ona pazasi) uye tsvuku.
Iyi yakafanana neiyo iPhone 7 Plus: iyo 8 Plus ine 5.5in inoratidzira uye mapatya-lens kamera inobuda zvishoma kubva kumashure. Uye hapana chiteshi chefoni.
Asi kumashure igirazi pane aruminiyamu, hapana imwe nhamba yakanyorwa kumashure (yedu UK modhi inongoti "iPhone / Yakagadzirwa neApple muCalifornia / Yakaungana muChina"), iyo zvesarudzo zvekuchengetedza iri 64GB uye 256GB (zvinopesana ne32GB, 128GB uye 256GB pane 7 Plus) uye sarudzo dzemavara isirivheri, Space Grey, tsvuku uye iyo nyowani yegoridhe. Hapana inopenya Jet Nhema pano.
The iPhone X haana bhatani reKumba kumberi, nechidzitiro chiri kudzika ndoda kusvika pasi pechassis. Iyo ine 'notch' yakabviswa pamusoro pechidzitiro, uye ine maviri makamera kumashure, akarongedzwa akatwasuka akatwasuka. Tarisa (asi usabviswe nechinhu chinobviswa chebrown, icho chako chingangove chisina):
Iyo iPhone X yakauya nemhando mbiri chete sarudzo - sirivheri uye Space Grey - asi haisisiri kutengeswa. Zvakare, ita chokwadi chekutarisa iyo iPhone XS, pazasi, iyo inotaridzika kunge yakafanana uye inogona kuunza zvimwe zvinozivikanwa nyaya.
The iPhone XR ine 6.1in skrini, asi ichokwadiwo nezveiyo iPhone 11, 12 uye 12 Pro. Zvimwe zvinobatsira, saka, ndizvo zvinhu zvitatu zvekuti haina bhatani reKumba, ine notch, uye inouya neine imwe kamera kamera kumashure.
Iyo inouya nhema, chena, bhuruu, yero, Coral (rudzi rweorenji peach) uye tsvuku.
Inonyengera, iyi, nekuti iyo iPhone XS inotaridzika yakafanana neiyo iPhone X. Ndeapi anogona mabhenefiti? Ikozvino inouya neruvara rutsva - goridhe - uye inopa nyowani 512GB yekuchengetera kugona kumusoro kwekupedzisira, kana iwe neimwe nzira uchikwanisa kuona izvo usina kuwana iyo Zvirongwa app (inova chaizvo kwaunofanirwa kunge uchienda).
Zvimwe zvepanyama kukwidziridzwa kubva kuX hazviite kuti mutengi aongorore. Girazi kumashure rakasimbiswa kuti riite shoma kuti rikurumidzire kubvaruka, uye chiyero chisina mvura chakawedzerwa kubva kuIP67 kuenda kuIp68, asi hapana kana mamiriro acho aunofanirwa kuyedza kusvika pakuparadzwa kungoziva foni yako.
The XS Max, senge XR, inogona kuzivikanwa nehukuru hwayo hwechiso, inova 6.5in ine simba. Ziva mupfungwa kuti izvi zvinofanirwa kuyerwa pakati pemakona ezvidzidzo uko micheto yekona yaizotendeuka kana makona asina kutenderedzwa, kana zvine musoro. Kunyange zvakadaro, ihombe screen yekare - ndizvo zvatiri kukuudza.
Kunge mamwe maX-akateedzana nharembozha haina bhatani repamba, uye skrini yayo ine notch kumusoro. Iyo inouya nesirivheri, goridhe uye Space Grey.
Mhando nhatu nyowani dzakaburitswa mumatsutso 2019. Yakachipa pane aya iiyo iPhone 11.
Iwo gumi nerimwe anotaridzika zvakafanana neiyo iPhone XR kubva gore rakapfuura, iine imwe nyore-kuona-musiyano: ine makamera maviri kumashure, akarongedzwa mukumira kwekumisikidza mukati mekona block. Hapana imwe iPhone ine iyi yekumashure-kamera gadziriso saka zvinofanirwa kuve nyore kuona.
The iPhone 11 inouya chena, nhema, girini, yero, yepepuru uye yakatsvuka, uye ine 6.1in skrini isina bhatani reKumba.
Iyo inoshamisira 11 Pro ine makamera matatu kumashure.
Iwe unogona kutaurira iyo 11 Pro uye 11 Pro Max zvakaparadzana nekuti iyo Max yakakura. Iyo 11 Pro ine 5.8in skrini (yakayerwa diagonally, kubva kukona kusvika kukona) uye zviyero 144mm x 71.4mm.
Iyo 11 Pro Max zvakare ine matatu malenzi emakamera kumashure, asi inoratidzira 6.5in skrini uye zviyero 158mm x 77.8 mm.
Apple yakamutsidzira inozivikanwa SE muna 2020, asi yaive diki diki pane yayo 2016 yakatangira. Ino nguva Apple yakaisa (yakawanda ye) izvo zveiyo iPhone 11 mune yakakomberedzwa-kumucheto chassis yeiyo iPhone 8.
Iyo ine 4.7in skrini uye imwechete kamera lens kumashure. Iyo ine bhatani repamba neTouch ID yakavakirwa mukati, uye kumashure igirazi.
The 12 mins ine 5.4in skrini (iine notch kumusoro) uye yakafanana mraba, mativi akapinza-mativi sevamwe vese gumi nevaviri-nharembozha. Iyo haina bhatani repamba.
Iyo ine maviri malenzi emakamera kumashure, asi aya anogara kuruboshwe rwechikamu chakakura chekamera module; pane ka flash padivi rerudyi rweizvi. (Unogona kuona kuti module iyi inotaridzika sei mumufananidzo weiyo iPhone 12 pazasi.) Kumashure igirazi.
The iPhone 12 - senge ese gumi nemaviri-akateedzana nharembozha - ine yakapinza, yakakomberedzwa-kumativi kunze kwemakona akakombama anoonekwa pane gumi-gumi-dzakateedzana uye mazhinji mazhinji mamodheru. Iyo ine 12in skrini (ine notch), maviri kamera lenzi kumashure uye isina Kumba bhatani, uye inouya nhema, chena, tsvuku, girini yakajeka, rima bhuruu nepepuru (inoratidzwa).
The iPhone 12 Pro iri nyore kwazvo kuziva nemubatanidzwa wayo katatu malenzi emakamera kumashure, akapinza, akakomberedzwa-kumativi uye 6.1in skrini. Iyo inouya nesirivha / chena, goridhe, nhema uye nerima bhuruu.
Pakupedzisira tinouya kune (panguva yekunyora) pamusoro peiyo renji, iyo iPhone 12 Pro Max. Iyo whopper, iine 6.7in skrini - iyo hombe yakambo - uye katatu kamera lensi kumashure. Iko kune notch kumusoro kwechidzitiro uye hapana Bhatani repamba, uye iwo mativi akapinza senge pane mamwe ese gumi-akateedzana nhare.
Kuti uwane mamwe mazano pamaoko akasiyana siyana anotengeswa neApple, tarisa pane edu iPhone kutenga gwaro. Uye kana iwe uri kutsvaga kuti utore chibvumirano pafoni yako inotevera, tarisa kutenderera kwedu kwe yakanakisa iPhone inobata.
iPhone 12 Pro Max yakadzokororwa: Akanaka uye akaipa kwapera mwedzi mitanhatu